Resa-papago tsa ho lany ! | NewsMada
Resa-papago tsa ho lany !
Samy maneho ny heviny ! Eny an-dalambe, ankalamanjana, any amin’ny televiziona, any amin’ny radio… Ao ireo mametaka petadrindrina na manoratsoratra eny rehetra eny. Samy te haneho ny maha papangolahy anaty katsaka azy avokoa ry zareo mpanao politika. Samy te hanasongadina fa mahavita sy vonona hanasoa ny vahoaka. « Papango lahy anaty katsaka: izay mivoaka, babany avokoa », hoy ny ohabolana malagasy. Ao ireo efa nitondra na mbola mitondra ary ny maniry hitondra.
Mbola ny fahendrena malagasy ihany no milaza ity : « isa ny amontana, roa ny aviavy, telo fangady… Andriamainty be ny papango. Kely mpitsoka farara ny takatra… ». Lalina ho an’izay tsy mahazo azy io tanisa io fa tsotra kosa ho an’izay miaina sy mahalala ny fomba nitaizan’ny Malagasy ny zanany.
« Ianao hitsikitsika natao ivavahana indray no lasa papango nipaoka ny zanak’akoho » ! Hafa indray ihany koa io. Saingy fahendrena malagasy tena tsy azo atao tsinontsinona satria mety hampitsimbadika zavatra maro.
… Tsy ho lany raha ny hevitry ny Malagasy momba io vorona antsoina hoe papango io. Tsy fiheverana fotsiny anefa fa fandinihana lalina tokoa. Diniho tsara fa bikana tokoa ny papango. Goavana, matanjaka, sns. Mahay mitily ny hazany. Kinga amin’ny fampiasana ny tanjany. Mpangalatra ny tsy azy. Mpampijaly ny marefo no ho izy. Mpanao sinto-mahery. Mpihinana ny anjaran’ny hafa…
Ny tsy azo lavina anefa, na eo aza ireo fandinihan’ny Ntaolo momba ny papango ireo ka nanehoany ny heviny, mbola misy ary maro ireo tsy mahalala na minia tsy mahafantatra ny papango. Tsy mahagaga raha tahaka izao i Madagasikara. Tsy ny papango vorona irery intsony no manao ny ataony fa ao koa ny papango taratasy sy ny papango hazo. Fa ireo manaiky rebirebeny moa izany mba inona ?